विश्व डिजिटल गइरहेको छ र you०% भन्दा बढि विश्व भ्रमित र अनिश्चित अवस्थामा छोडिनेछ यदि तपाईं अनलाइन कक्षाको लागि छनौट गर्नुभएन भने! IELTS परीक्षा पनि अहिले कम्प्युटरमा लिन सकिन्छ, र उम्मेद्वारहरूले अब उनीहरूको मनपर्ने स्थानहरूमा कम्प्युटर-वितरित IELTS परीक्षण दिन सक्छन् जहाँ अधिक परीक्षा मितिहरू उपलब्ध छन् र परिणामहरू एक हप्ता भन्दा कममा डेलिभर हुन सक्छ। १in बर्ष भन्दा बढी अ English्ग्रेजी भाषा पढाउँदै गरेको प्रशिक्षक, प्रशिक्षक जेम्सलाई थाहा पाए कि डिजिटल सिकि education शिक्षाको भविष्य हो, उनले २०१ 2017 देखि भर्चुअल प्रशिक्षकको नेतृत्वमा अनलाइन सत्रहरू सञ्चालन गर्न थाले!
भर्चुअल प्रशिक्षक-नेतृत्व अनलाइन प्रशिक्षण के हो?
भर्चुअल प्रशिक्षक-नेतृत्व अनलाइन प्रशिक्षण (VILT) एक प्रशिक्षक द्वारा आयोजित गरीएको छ जुन भर्चुअल वातावरणमा कक्षा कोठा अनुभव अनुकरण र सिर्जना गर्दछ। प्रशिक्षकको नेतृत्वमा प्रशिक्षणको अभ्यासले प्रशिक्षक र सिकार दुबैलाई पाठ्यक्रम सामग्री व्यक्तिगत रूपमा वा समूह सेटि groupमा कुराकानी गर्न र छलफल गर्न अनुमति दिन्छ। ट्रेनर जेम्ससँग अनलाइन सत्रको मामलामा, तपाईसँग आफ्नो परीक्षाको दिन सम्म उसको मद्दत लिने स्वतन्त्रता छ।
VILT का फाइदा:
भर्चुअल प्रशिक्षकको नेतृत्वमा प्रशिक्षणले प्रशिक्षार्थीहरूलाई ह्यान्ड-अन र प्रशिक्षकको साथ अन्तर्क्रियाको अनुमति दिन्छ। निम्न केही फाइदाहरू छन् जुन नयाँ पुस्ताले VILT को प्रयोगको परिणामको रूपमा देख्नेछ:
केवल एक विशेषज्ञ र अनुशासित प्रशिक्षकले राम्रोसँग तयार प्रस्तुतीकरणको साथ प्रशिक्षण सत्रलाई कहिलेकाँही विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुरुप सुविधा प्रदान गर्दछ।
यसले शिक्षार्थीहरूलाई एक वा बढी प्रश्नहरू सोध्न अनुमति दिन्छ र प्रतिक्रियालाई वास्तविक समयको आधारमा पनि अनुमति दिन्छ।
प्रशिक्षक दृष्टिकोणको शैली अनुकूलित गर्न सकिन्छ यदि यदि उसले बुझ्छ कि कक्षाले उनीहरूले डेलिभर गर्न चाहेको जानकारी प्राप्त गरिरहेको छैन। तिनीहरू पछाडि अघिल्लो बिन्दुमा जान सक्छन् कुनै खास तत्वमा यदि उनीहरूले भ्रम महसुस गरे भने।
प्रत्येक सत्र सामाजिक शिक्षा अनुभव हुन सक्छ।
समूह सत्रमा, सिक्नेहरूले आफ्ना साथीहरूले सोधेका प्रश्नहरूबाट सिक्न सक्छन्।
तालिम सत्र एक अनलाइन कन्फरेन्सिंग सफ्टवेयर अनुप्रयोग मार्फत प्रदान गरिएको छ, जस्तै फ्रीकन्सेन्सक्ल, जुम, GoToMeeting र यस्तै।
प्रशिक्षार्थीलाई ट्रेनर जेम्सको IELTS सत्रमा सम्मिलित हुन, तिनीहरूसँग एक ल्यापटप वा स्मार्टफोन हुनु पर्छ जुन द्रुत इन्टरनेट जडानको साथ र हेडफोन (इयरपीस) हुनुपर्नेछ जहाँ उनीहरू सुन्न र बोल्न सक्ने छन् दुईतर्फी संचार गर्न।
अनलाइन कोर्सको लम्बाइ and र weeks हप्ताहरू बीचमा रहन्छ (कहिलेकाँही कम) र प्रत्येक सत्र एक घण्टासम्म रहन्छ। पाठ्यक्रममा, अध्ययनकर्ताहरू अध्ययन योजना मार्फत बल र कमजोरीको आधारमा प्रशिक्षित हुन्छन्, तर पाठ्यक्रमको विशाल बहुमत IELTS को सबै मोड्युलहरू (सुन्ने, पढ्ने, लेख्ने, बोल्ने) सम्बोधन गर्ने उत्तम रणनीतिहरू समावेश गर्दछ। परीक्षा पाठ्यक्रम शुल्क $ $$ हो, विश्वमा सस्तो लाइभ इन्स्ट्रक्टर-नेतृत्व अनलाइन कोर्स। भर्खर $ paying season (वा थोरै मौसमी प्रस्तावहरूको समयमा) तिरे पछि IELTS परीक्षाको लागि तयारी हुन आवश्यक सबै चीज प्राप्त गर्ने कल्पना गर्नुहोस्।
किन प्रशिक्षक जेम्स संग IELTS कोर्स लिनुहुन्छ?
नियमित मूल्यांकन र स्थिर प्रतिक्रिया।
रेकर्ड गरिएका अनलाइन सत्रहरू र भिडियोहरूको असीमित अवलोकन।
तपाईको सुविधाको लागि अध्ययन गर्नुहोस्; हामीसँग लचिलो घण्टा छ।
विश्वको कुनै पनि स्थानबाट पहुँचयोग्य।
प्रशिक्षक तपाईंलाई Viber र ईमेल मा नियमित रूपमा जडान गरिएको छ।
प्रत्येक सेक्सनको लागि लक्ष्य 7+ ब्यान्ड प्रशिक्षण।
वर्ग आकार सामान्य रूपमा सानो भएकोले, प्रशिक्षक जेम्सले विगत तीन बर्षदेखि 75 75% भन्दा बढीको सफलता दरको आनन्द लिइरहेका छन्।
भर्चुअल प्रशिक्षकको नेतृत्वमा अनलाइन प्रशिक्षण बारे ट्रेनर जेम्सको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, कृपया लिंकलाई पालना गर्नुहोस्: अनलाइन IELTS ट्रेनर जेम्सको साथ तयारी।
तपाइँ यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ: https://www.youtube.com/watch?v=5ifcpz6WwiE.